गाउंमा एम्बुलेन्स् गुडाउंदै बेलायतका स्याङ्जाली | We Nepali
२०७१ चैत २३ गते १६:२२
आगामी १० अप्रिलमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको एम्बुलेन्स्
लन्डन । आफ्नै वाध्यता र परिस्थितिले कर्मथलो प्रवासको कुन कुनामा बन्छ भन्न सकिन्न । तर, जहां रहेपनि मन मस्तिष्कमा आफ्नो मातृभूमि र हुर्के बढेको गाउं ठाउंको सम्झनाले नपिरोल्ने कसलाई होला ?
बेलायतवासी स्याङ्जालीहरुको तन मन पनि अहिले मातृभूमितिरै बढि छ । दुई छाक काटेर पनि आफ्नो गाउंको विकासमा उनीहरुको समर्पण बढ्दै गएको छ । यसअघि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र संगीतका क्षेत्रमा करोडौं रुपैयां मातृभूमिलाई सुम्पिइसकेका स्याङ्जालीले अब गाउंमा एम्बुलेन्स् व्यवस्था गरिदिने भएका छन् । सोंपाल समाज यूकेको सक्रियतामा विभिन्न दाताबाट चन्दा संकलन गरि उक्त एम्बुलेन्स् खरिद गरिएको हो । आगामी १० अप्रिलका दिन अस्पताल प्रांगणमा एक विशेष समारोहबीच एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । हस्तान्तरणका अवसरमा पञ्चेबाजासहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत हुने तय भएको छ ।
समाजका सल्लाहकारहरु डेभिड गुरुङ, क्याप्टेन रि. प्रेमबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष राम गुरुङ, कोषाध्यक्ष जगदिश गुरुङ, संस्थापक अध्यक्ष विजय गुरुङ, सल्लाहकार जुमबहादुर गुरुङ लगायतको टोली अहिले एम्बुलेन्स हस्तान्तरणका लागि नेपाल पुगेको छ ।
गत वर्ष स्याङ्जाको पञ्चमुल गाविसमा झण्डै ५ करोड रुपैयां लगानीमा राजास्वांरा अस्पताल बने पनि एम्बुलेन्स नहुंदा विरामीले सास्ती खेप्दै आएका थिए । त्यही अभाव पुरा गर्न समाजका सल्लाहकार डेभिड गुरुङको परिकल्पनामा दुई वर्षअघि एम्बुलेन्स् किन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । एम्बुलेन्स सञ्चालनपछि आरुचौर, रापकोट, पञ्चमुल र दारुङ गाविसका स्थानीय वासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने समाजका भूपू अध्यक्ष एवं वर्तमान सल्लाहकार क्या. रि. प्रेमबहादुर गुरुङले जनाए ।
क्याप्टेन गुरुङकै संयोजकत्वमा आगामी ९ र १० अप्रिलका दिन दुई दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समेत हुंदैछ । स्त्रीरोग, दन्त रोग विशेषज्ञ एवं फिजिसियन गरि तीनजना डाक्टरले शिविरमार्फत विरामी जांच गर्ने कार्यक्रम छ ।
सिकिस्त विरामीलाई प्राथमिकता दिने गरि एम्बुलेन्स् सञ्चालन हुने र सेवा भरपर्दो, छिटो छरितो एवं व्यवस्थित गर्न एउटा समिति समेत बनाइएको समाजले जनाएको छ ।
सन् २००७ मा स्थापित सोंपाल समाज यूकेले यसअघि व्यक्तिगत तवरबाट गाउंलाई धेरै आर्थिक सहयोग गरेपनि अब संस्थागत रुपमा सामाजिक कार्यमा समर्पित हुनेमा संस्था प्रतिवद्ध छ ।